Nbupu zuru ụwa ọnụ - Free International Delivery - WoopShop
Kaadị / £0.00 0
Ihe ngwugwu sitere na ụlọ nkwakọba ihe anyị na China ga-ebuga site na ePacket ma ọ bụ EMS dabere na ịdị nha na nha nke ngwaahịa ahụ. Ihe ngwongwo e si n'ụlọ nkwakọba ihe US bugara anyị site na USPS. Ya mere, maka ihe ezi uche dị na ya, a ga-ebufe ụfọdụ ihe na ngwugwu dị iche iche.
Anyị enweghị njikwa maka ụgwọ ndị akwụ ụgwọ ahụ, Anyị enweghị ụgwọ maka ụgwọ ọ bụla maka omenala mgbe a kwadatara ihe dịka iwu ya na ọrụ mbubata dị iche iche site na mba ruo ná mba. Site n'ịzụta ngwaahịa anyị, ị kwenyere na a ga-ebunye gị otu ma ọ bụ karịa nchịkọta ma nwee ike ịnweta ụgwọ omenala mgbe ha rutere mba gị.